मन्त्रिपरिषदको १० मिनेट बैठक, जसले ओलीलाई गलायो !::Online News Portal from State No. 4
मन्त्रिपरिषदको १० मिनेट बैठक, जसले ओलीलाई गलायो !
चिकित्सकले जिद्दि गरे, अस्पताल आएँ - प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, १२ कार्तिक – दशैँ सकिनै लाग्दा काठमाडौंमा चिसो बढ्दै गएको थियो। त्यही बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रुघाखोकी, ज्वरोले च्याप्यो र शुक्रबारका लागि तय गरिएको मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न सकेन। ६७ वर्षे प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यको हिसाबले सधैँ चिकित्सकीय सेवा लिइरहनु पर्ने अवस्थामा छन्। त्यसैले चिकित्सकहरु दिव्या सिंह शाह र दिलिप शर्मा सधैँ उनको रेखदेखमा रहन्छन्।
शनिबार तय गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को चियापान समारोहमा अनुपस्थित भएपछि उनी अस्वस्थ रहेको चर्चा फैलियो। निजी चिकित्सकहरुले धुलो, भिडभाडबाट जोगिन र आराम गर्न सल्लाह दिएकाले उनी चियापानस्थल भृकुटीमण्डप गएनन्। अन्य दलका शीर्ष नेता, कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा सार्वजनिक जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु बोलाइएको चियापानमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले विशेष चर्चा पायो। सचिवालयले स्पष्ट पार्दै भन्यो– प्रधानमन्त्रीलाई मौसमी रुघाखोकी र ज्वरो आएको हो। स्थिति गम्भीर छैन। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्थिति गम्भीर छैन भनेको २४ घन्टा नबित्दै उनी अस्पतालको सिसियुमा भर्ना भए, सोमबार बिहान ४ बजे।
मन्त्रिपरिषद बैठकमा १० मिनेट
स्वास्थ्य समस्या सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई आइतबार अपरान्हको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि झनै गाह्रो भयो।। उनलाई शुक्रबार साँझदेखि नै हल्का ज्वरो आइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री सरकारी निवासमै आराम गरिरहेकाले आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठक सधैँ झैँ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएन। बिहान ११ बजेको बैठक स्थगित गर्दै दोस्रो पटक साँझ बालुवाटारमा बैठक राखियो। अघिपछि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने मन्त्रिपरिषद बैठक सर्नुमा ओलीको स्वास्थ्य नै कारक थियो।
एक मन्त्रीका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री करिब दश मिनेट मात्रै सहभागी भएका थिए। मन्त्रिपरिषदको छोटो बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कतार भ्रमण स्वीकृत गर्यो, मलेसियासँग श्रम सम्झौता गर्न श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई अख्तियारी दियो र गोर्खापत्र संस्थानका महाप्रबन्धकबाट बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। यो त्यही मन्त्रिपरिषद बैठक थियो जसले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य थप जटील बनायो।
‘आइतबार दिउँसोसम्म स्थिति त्यति गम्भीर थिएन। साँझपख मन्त्रिपरिषदको बैठकका कारण एक्जर्सन बढ्यो’, ओलीको उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकले भने, ‘राति श्वास प्रश्वासमा समस्या बढ्यो, घ्यार–घ्यार हुन थालेपछि बालुवाटारमा औषधी दिएर अस्पताल लगिएको हो।’
दशैँको टीका अर्को कारक
एक दशकअघि मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिकित्सकले संक्रमण हुनसक्ने भन्दै भीडभाडमा नजान सल्लाह दिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य संक्रमित हुनुमा दशैँको भीडभाड पनि कारक रहेको ती चिकित्सक बताउँछन्। ‘दशैँमा टीका लगाउनेहरु बालुवाटारमा धेरै आए, त्यति बेलै उहाँलाई रुघाखोकी लागेको थियो। शुक्रबार साँझदेखि अलिअलि ज्वरो देखिएको हो’, प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक दिव्या सिंह भन्छिन्, ‘हिजोबाट उहाँमा खोकी र सुगर बढेको हुनाले अस्पताल ल्याएका हौं।’ यो दशैँमा प्रधानमन्त्रीले पाँच दिनसम्म सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सुरुमा कार्तिक २ गते एक दिन मात्र टीका लगाइदिने कार्यक्रम सार्वजिनक गरेको थियो। पछि त्यसलाई बढाएर कोजाग्रत पूर्णिमा अर्थात् ७ गतेसम्म पुर्याइयो। पाँच दिनमा ओलीले छ हजार बढीलाई दशैं टीका लगाइदिएको अनुमान छ। भिडभाडबाट बच्नुपर्ने उनलाई यसले नराम्रो असर गरेको चिकित्सकहरुको बुझाई छ।
किन रातारात लगियो अस्पताल ?
एन्टिवाइटिक औषधीका कारण आइतबार मध्यराति ओलीको शरीरमा सुगरको मात्रा असन्तुलित बनेको थियो। चिकित्सकहरुका अनुसार रुघाखोकी र ज्वरोबाट गुज्रिरहेका उनको शरीरमा सुगर मात्रा बढेपछि सोमबार बिहान ४ बजे अस्पताल लाने निर्णय गरिएको हो। शिक्षण अस्पतालस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर भर्ना गरिएका उनलाई सिसियुमा राखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको उपचार सेन्टरका बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्रा. अरुण सायमीको नेतृत्वमा तीन चिकित्सक संलग्न छन्। सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक डा. उत्तमकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार टोलीमा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक दिव्या सिंह र टिचिङ अस्पतालका छाति रोग विशेषज्ञ सन्तकुमार दास उपचार टोलीमा छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै चिकित्सक। तस्विर: प्रबिन काेइराला
‘सुगर निकै बढ्यो। इन्सुलिन दिए पनि समय समयमा सुगर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अस्पताल ल्याएका हौं’, सिंह भन्छिन्, ‘संक्रमण देखिएको अवस्थामा एन्टिबायोटिक दिन पनि अस्पतालमै सजिलो हुन्छ।’ ओलीको स्वास्थ्य अवस्थामा सिसियुमा राख्नु नपर्ने भए पनि किड्नी प्रत्यारोपण गरिसकेको बिरामी भीडबाट जोगिनु पर्ने भएकाले सिसियु उत्तम विकल्प भएको उनले बताइन्। ‘सिसियु चाहिने अवस्था भएर राखेको होइन’, उनले भनिन्, ‘सम्भावित संक्रमणबाट बच्न बढी सावधानी अपनाइएको हो। उहाँको स्वास्थ्यमा गए रातिभन्दा सुधार आएको छ।’
‘आफैँ मोटर चढेर अस्पताल भर्ना’
कम्तिमा तीन दिन ओलीको उपचार अस्पतालमै हुने डा. सायमी बताउँछन्। ‘अस्तपालमाबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै धपेडी हुने भएकाले एन्टिबायोटिक नसकिउन्जेल यहीँ राखिनेछ,’ उनले भने। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले प्रधानमन्त्रीको अवस्थामा गम्भीर नरहेको र आफैँ मोटर चढेर अस्पताल गएको दाबी गरे। ‘आफैँ मोटर चढेर आउनु भएको हो र भर्ना हुनु भएको हो। घरमा बसेर उपचार गर्नुभन्दा अस्पतालमा उपचार गर्दा चाँडै निको हुने भएकाले भर्ना गरिएको हो,’ अर्यालले नेपालखबरसँग भने, ‘रुघाखोकी बढ्दै गएर समस्या ल्याउँछ कि भनेर पूर्व सावधानी लिइएको हो।’
बालुवाटारमै उपचार गराइरहेका प्रधानमन्त्रीलाई राती अस्पताल ल्याएर सिसियुमा राखिएपछि हामीले उपचारमा संलग्न चिकित्सक टोलीका सदस्यहरूसँग उनको वास्तविक स्वास्थ्य अवस्था जान्न चाहेका थियौं। हाम्रो जिज्ञासामा टोलीका एक जना चिकित्सकले भने, ‘अस्पतालमा हुने सामान्य उपचार बालुवाटार मै भइरहेको थियो। यहाँ ल्याएर सिसियुमा नै भर्ना गर्नुपरेपछि अवस्था कस्तो हो भनेर आफै बुझ्नुस्।’
गत वर्ष बैंककमा उपचार गरेर फर्किएपछि अाेली
‘विदेश लानु पर्ने अवस्था छैन’
प्रधानमन्त्री ओलीले बैंककको समतिभेज अस्पतालमा नियमित चेकजाँच गराउँदै आएका छन्। उनी विरामी भएर अस्पताल भर्ना भएपछि विदेशमा उपचारको चर्चा समेत भइरहेको छ। तर उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुका अनुसार अहिले विदेश लानुपर्ने अवस्था छैन। ‘संक्रमण मात्र भएको हो, विदेश लानुपर्ने अवस्था छैन’, सिंह भन्छिन्, ‘हिजो रातिभन्दा अहिले क्रमशः सुधार भइरहेको छ।’
चिकित्सकले जिद्दि गरे, अस्पताल आएँ-ओली
प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भर्ना भएपछि सोमबार बिहान उनलाई भेट्न पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल टिचिङ अस्पताल पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीले उनलाई ‘चिकित्सकले जिद्दि गरेकाले अस्पताल भर्ना भएको’ सुनाए। उनले शनिबारको चियापानमा पनि आउन मन हुँदाहुँदै चिकित्सकको सल्लाहअनुसार अनुपस्थित भएको सुनाएका थिए। बरिष्ठ नेता नेपालले भने, ‘कार्यक्रममा नआएर ठिकै गर्नुभयो, हामी पुग्दा कस्तो धेरै धुलो थियो।’ ओली अस्पताल भर्ना भएसँगै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले शनिबारसम्मका उनका सबै औपचारिक कार्यक्रम रद्द गरेको छ। नेपालखबर